Alternative for code premium Spotify
1. code premium Spotify
2. Dhegayso Spotify music xor ah oo aan code premium Spotify via TunesGo
3. Sidee si ay u wadaagaan music inay mobile / iPhone via TunesGo
Qeybta 1: code premium Spotify
Premium Spotify waa codsi la yaab leh, kaas oo u ogolaanaya inuu u ciyaaro aad shakhsi playlists offline. Waa codsiga ugu fiican ee ujeedada aad sodcaalka oo aan heli karin in ay internet-ka. Sidaas oo faa'iidooyin dhowr ah oo la xiriira Spotify Premium ee, waxa kaliya oo galaa xun yahay lacagta ku lug iibsan adeeg joogtada ah ee caymiska. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo xeerka premium Spotify, waxaad saari karaan looga baahan yahay in ay bixiyaan lacag si ay u taraynin adeegga ugu fiican adduunka music iyo abaalmarinayn oo dhan faa'iidooyinka Premium.
Sidee loo helaa code premium Spotify
Waxaa jira siyaabo dhowr ah si aad u hesho code premium Spotify. Dhowr websites waxaa lagu yaqaan in ay bixiyaan code premium Spotify ah, kuwaas oo u ogolaan Users ah in laga takhaluso ee looga baahan yahay bixinta iyo weli gaawaarida ay hawshii reer adeegyada Premium ee Spotify. Waxaa jira dhowr ah Shabakadaha Internetka bixiya Spotify Premium Code iyo iyadoo la kaashanayo dhowr matoorrada Spotify Premium Code, helitaanka inay Premium Spotify Xeerka waxaa la samayn karaa. Laakiin weli siidaayay kuwa matoorrada Spotify Premium Code aan la ansixiyey karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah dhufto dhab ah si aad u hesho dhab ah Spotify Premium Code, taas oo ku iman kartaa in la isticmaalo weyn.
Siyaabaha aad u hesho code premium Spotify ka mid ah gadashada xayaysiis ama hal mar Trial Period. Hab kale oo lagu qoran karaa foomka of Spotify code premium matoorka. Inkastoo, habka soo tixi karaa qaab dhowr websites kuwaas oo bixiya code premium Spotify lacag la'aan ah. By kaliya la booqanayo websites iyo dhamaystirka qaar ka mid ah tallaabooyinka foomka doorashada nooca Times oo kale, waxaad ka heli kartaa code premium Spotify.
Qeybta 2: Dhegayso Spotify music xor ah oo aan code premium Spotify
The premium Spotify bixiyaan dhowr faa'iidooyinka in dadka isticmaala iyo isticmaalka joogtada ah ee caymiska, waxaad si fudud u saari karaan xayaysiisyada iyo xitaa waxay fursad u leeyihiin in ay si fiican oo tayo leh dhawaaqa. Iyadoo fursadaha of kaydiyo ilaa 3000 heeso ujeeddo ah dhagaysto offline songs, Premium Spotify waxay bixisaa faaidooyin, taas oo dadka isticmaalaya Spotify lacag la'aan ah kama tari karaan.
Dhegayso Spotify music free la TunesGo
TunesGo waa qalab weyn ujeeddo ah music Spotify ah. Waxa ay u ogolaataa Saving of music Spotify ee qaab MP3 ka dib markii lagu duubo iyo waxay bixisaa dhowr ah qaababka loogu tala galay ujeedada Music Spotify ah.
sida ay u soo bixi / record Spotify music via TunesGo
Iyada oo la adeegsanayo Wondershare TunesGo, waxaad kala soo bixi kartaa ama u qoraan music Spotify. Waxaa jira qaar ka mid ah qalab laga helo suuqa, taasoo si fudud u ogolaan kartaa in aad kala soo bixi music ka Spotify iyo iyaga offline maqli. Iyada oo ay fududahay in la isticmaalo iyo codsiga fudud oo ah qaab Wondershare TunesGo, waxaad fursad u haysataa ugu fiican idinka soo hor jeedda in isla ujeeddadaas. Ujeedada isticmaalaya TunesGo ah, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay u soo dejisan ka ay si rasmi ah iyo waqti isku mid ah soo bixi Spotify. Wixii download, taas aawadeed, waxaad u baahan tahay riix qaybta Spotify heli karaa TunesGo.
Hadda, si fudud riix badhanka leh taariikhqorihii in menu ugu weyn ee TunesGo. Markaasay aad u baahan tahay in ay doortaan a Spotify habayn hal diiwaangelin oo ciyaaro.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u riix doonaa, oo aad si toos ah u arki doontaa in TunesGo ayaa bilaabay in ay shaqada oo ay bilowdey in ay u qoraan habayn la doortay.
Si toos ah, waxaad heli doontaa file MP3 ah in ay maktabadda sida ugu dhakhsaha badan lagu qoro habka loo sameeyo. Geedi socodka Buuxi qaadan kartaa Minutes ugu badnaan.
Duubo ee Spotify Music waxaa la samayn karaa sida soo socota
Burcad TunesGo. Kadib markii ay TunesGo, u tag qaybta 'ogaado' oo ay doortaan doorasho 'taariikhqorihii'.
Riix Cas Rec (duubo) badhanka. Taariikhqorihii ahaa bilaabi doonaan in ay ka soo muuqan iyo bilaaban doono 00:00:00.
Markaas Burcad Spotify iyo ciyaaro song aad rabto si ay u qoraan.
TunesGo bilaabi doonaan diiwaan heesta.
Sidee si ay u wadaagaan music inay mobile / iPhone via TunesGo
Qaybsi ee Music ah in Mobile ama iPhone Via TunesGo lagu dhammeystiri karo fudayd badan leh. Iyadoo click kaliya, si sahal ah si Lugood kuu soo gudbin karaa music iyadoo la kaashanayo TunesGo. Waayo, markii dadka la isticmaalayo Windows sida nidaamka qalliinka, si fudud u dooran music Spotify ee aad rabto in aad u wareegto Lugood. Markaas fiiro gaar ah xagga hoose ee suuqa kala Library, iyo riix batoonka oo qoreysa "Add to Lugood '. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad samayn in, aad haatan ka arki kartaa Musics aad soo xulay in playlist TunesGo ku Lugood.
Waxaa jira hab kale oo ujeeddo oo isku mid uun. Waxaad xaq u-riix kartaa doorashada ayaa sheegay in ka dibna riix 'Add to Lugood Library' oo aad aragtaan ku dhammeeyo shaqada la mid ah sida ka hor.
Ujeeddo ah dhoofinta music diiwaan inay iPhone ama wax Phones via Tunesgo, waxaad raaci kartaa hoos tallaabo.
Connect aad telefoon ama qalabka mobile. Xaq-guji 'la diiwaangeliyey' bandhigay hoos 'Library' ka dibna dooro "Dhoofinta si 'oo ay doortaan qalabka. Si aad u wareejin song hal ama songs soo xulay, riix checkbox ka hor inta horyaalka heesta. Markaas Right-guji la diiwaangeliyey hoos Library dooro 'dhoofinta Si' oo ay doortaan qalabka iyo aad samayn nidaamka.
> Resource > Spotify > Alternative for Spotify Premium Code